Mandeha ny ora, ny andro,
Toy izany koa ny volana,
Mivadibadika eny ny taona.
Be ny sento mitambolona,
Eo am-pitanisana ny olana ;
Mitaky asa tena mivaingana,
Anio, ary koa mandava-taona.
Miandry, eny miandry foana,
Ny mety ho fiovan’ny tontolo ;
Tsy hita manéangasanga anefa,
Izany fiovana rehetra izany.
Na itodiana ny fotoana lasa,
Na mibanjina ny ho avy im-polo,
Mbola indro manantena ihany,
Mba tsy hisy sento sy tomany.
Leo ny miandry foana anefa,
Sady malahelo no mitoloko ;
Leo ny fampanantenana lava,
Satria ny andry indray no olana.
Mitohy isan'andro vaky izao,
Ireo fahadisoana maro loko,
Ary tsy misy fitondrana akory,
Na fandrosoana vaha - olana.
Inona ary ny mety sy ny tsara,
Haroson-tsika ary hirosoana ;
Mety hiatrehana sy handresena,
Izany zava-misy rehetra izany.
Aleo miasa mafy angamba,
Mba hitondrana ny fandrosoana ;
Andriamanitra, tsy andrin’ny hafa,
Toa lazaina, andrin-tsika ihany !